China kwalenza Sheets kwemveliso kunye Factory | Ukutsala
Isicelo: Izikhongozeli ezingasetyenziswanga ngoxinzelelo kunye neetanki zokugcina.
Isilayidi esivulekileyo ngumtya wentsimbi kunye nobukhulu obuthile xa ushiya umzi-mveliso, kunye nembasa yesinyithi enobunzima obuthile kunye nobubanzi obuziqengqele ngokweemfuno zomsebenzisi. Iplate yentsimbi yoqobo iqengqelwe kubungakanani obufunwa ngumgangatho wesizwe xa ishiya umzi-mveliso. Ngokubanzi, ipleyiti yoqobo inemilinganiselo engqongqo, ukusebenza okungcono kunye nexabiso eliphezulu. Ukuvula icwecwe kutshiphu.
Ubunzima bepaneli ephathekayo yi-1.5-20mm, kwaye izinto zi-Q235 kunye ne-Q345. Emva kokutyibilika, ukulinganisa, ukucola kunye nokucheba, iba yipleyiti ethe tyaba ngobude nobubanzi obufunekayo. Kufanelekile ukuba kusetyenzwe iipleyiti ezibandayo ezisongiweyo, iipleyiti kwalenza, iipleyiti ezenziwe ngombala, kunye neepleyiti zentsimbi.
Izibonelelo zezi zilandelayo
Ixabiso lixabiso eliphantsi kwaye ubude bunokugqitywa ngokukhululekileyo;
2. Ukulungele ukuthutha, kungakhathaliseki ukuba ubukhulu beplate yensimbi; Kukwalungele kakhulu ukulayisha nokukothula izikhongozeli, kwaye kukhuseleke kakhulu ngexesha lokuhamba. Xa kuthelekiswa nekhoyili kwalenza, oko kube lula olukhulu kunye nokhuseleko ngexesha zokuhamba
3. Ukusika kulungele, kwaye izinto zinokunqunyulwa ngokweemfuno zokwenyani zesayizi yentsimbi;
4. Gcina izinto ngokufanelekileyo. Umzekelo, itanki yokugcina ifuna iipleyiti ezingama-20 zentsimbi ezingama-6800 × 1500 × 6. Iipleyiti zentsimbi yentengiso ngokubanzi zingama-6000, 8000, kunye nama-9000 ubude. Ukuba kusetyenziswa iipleyiti zensimbi yentengiso, kuya kubakho intsalela encinci. Ngepleyiti evulekileyo, ipleyiti yesinyithi engama-6900 inokusetyenziswa ngokuthe ngqo, egcina izinto, ikwayenye inzuzo enkulu. Ngokukodwa kwizixhobo zensimbi ezingenasici, umphumo wokugcina izinto kunye nokunciphisa iindleko kubonakala kakhulu.
Isixhobo: SGCC, S350GD + Z, S550GD + Z, DX51D, DX52D, DX53D
Ukuthambisa i-Zinc: 40-275G / M2
I-Spangles: Akukho Spangle / Spangles
Technique: Hot liqengqiwe / Ingqele liqengqiwe
Packaging: umgangatho wokupakisha wokuthumela kwelinye ilizwe
Unyango lomphezulu: i-oyile, i-passivity okanye i-chromium-free passiv, passivation + oiled, chromium-free passivation + oiled, ukumelana neminwe okanye i-chromium-free ukumelana neminwe.
Egqithileyo Ngqo welding umbhobho
Okulandelayo: Iikhoyili zentsimbi ezishushu ezishushu